Fibromyalgia uye Kubata Mimba [Kuita Sei Kubata Nhumbu naFibromyalgia]
02 / 04 / 2019 /0 Comments/i fibromyalgia/av kundikuvadza
Iwe une fibromyalgia uye une pamuviri - kana kufunga nezvekuva mumwe? Zvino zvakakosha kuti uzive kuti fibromyalgia ingakanganisa sei iwe semukadzi ane nhumbu panguva yekuzvitakura. Pano, tichazopindura yakawandisa mibvunzo pamusoro pekuve nepamuviri ne fibromyalgia.
Dzimwe nguva zviratidzo zve fibromyalgia zvakajairika - sekurwadziwa, kuneta uye kushushikana - zvinogona kuve nekuda kwekuzvitakura iko pachako. Uye nekuda kweizvi, ivo vanogona kuve vakagadziriswa-pasi. Zvakare ndozvekuti kushushikana kwakawedzera kwekuva nemwana kunogona kukonzeresa fibromyalgia flare inokwira - izvo zvinoita kuti unzwe zvakanyanya. Kugara uchiteerana nachiremba kwakakosha.
Tinorwira avo vane fibromyalgia, kurapwa kwemarwadzo kusingaperi uye varwere kuti vave nemikana iri nani yekurapa nekuferefeta.
Chinhu chisina kubvumiranwa nemunhu wese, zvinosuwisa - uye basa redu rinowanzo pikiswa neavo vanoda kuita hupenyu hwezuva nezuva kunyanyooma kune avo vane kurwadziwa kusingaperi.. Govera chinyorwa, sesu pane yedu FB peji og yedu YouTube chiteshi munhau dzezvemagariro kubatana nesu mukurwira hupenyu hwese hwepamoyo kune avo vanorwara nemaronda.
Ichi chinyorwa chinoongorora uye chinopindura mibvunzo inotevera maererano ne fibromyalgia uye nhumbu:
Fibromyalgia inokanganisa sei kubata nhumbu?
Ko kushushikana-kwakanangana nepamuviri kunowedzera fibromyalgia?
Ndingagone kunwa mushonga we fibromyalgia kana ndakabata pamuviri?
Ndeapi ekurapa anokurudzirwa kune vakadzi vane pamuviri vane fibromyalgia?
Sei kurovedza muviri uye kufamba kwakakosha kana uine nhumbu?
Ndeapi Maitiro Ekuita Avanogona Kuita neFibromyalgia Kana Aine Pamuviri?
1. Fibromyalgia Inokanganisa Sei Kubata Mimba?
Iyo nhumbu inotungamira mukuwedzera kukuru kwehuwandu hwehomoni mumuviri.
Pamusoro pekuwedzera uremu, muviri uri mukusakwana uye chimiro chitsva chemuviri chinowanikwa. Mwedzi mitatu yekutanga yemimba inowanzo kukonzera kusvotwa uye kupera simba. Sezvauri kuona, vanhu vazhinji vane fibromyalgia vanozoona kuwedzera kwezviratidzo zvavo mukati mepamuviri nepamusana pekushushikana kwehomoni iyi.
Kutsvagurudza kwakaratidza kuti vakadzi vane fibromyalgia vanogona kuve nemarwadzo uye zviratidzo mukati mepamuviri zvichienzaniswa nevaya vasina chirwere chisingaperi chekurwadziwa. Hazvina kunyanya kushamisa, pamwe, sezvo muviri unopinda mune dzimwe shanduko.Nehurombo, iyo ongororo yakaratidza kuti vanhu vazhinji vanoona izvo zviratidzo zve fibromyalgia zvinowedzera mukuva nepamuviri. Zvekare, munhu anoona achiwedzera nekurwadziwa kwakawedzera, kupera simba uye kushushikana mupfungwa mumwedzi mitatu yekutanga yekuzvitakura.
Pano tinoda kukanda mvura pamoto tichiti vanhu vazhinji vanotaura zvakare kuvandudzwa kwezviratidzo panguva yekuzvitakura, saka hapana 100% sarudzo pano.
Tinoda kusimbisa kuti nhumbu yoga, kutambanudza uye kurovedza muviri ingave nzira yakanaka yekudzora kushushikana kwepfungwa uye kwemuviri mukati memimba yose. Mune chinyorwa pazasi iwe unogona kuona chirongwa chekudzidzisa chinokuratidza mashanu mashanu akanyarara maekisesaizi.
2. Inoita here nhumbu-Inoenderana ne Stress Aggravate Fibromyalgia?
Isu isu vane fibromyalgia tinoziva kuti kushushikana kwakanyanya kunogona kukanganisa sei kwedu kusingaperi kurwadziwa kuongororwa - uye nhumbu inokonzeresa kushushikana mupfungwa uye mumuviri.
Tinofanirawo kurangarira kuti kubereka pachako inguva yekushushikana kwakanyanya kuna amai. Munguva yese yepamuviri, une shanduko huru mumazinga ehormone mumuviri - kusanganisira estrogen uye progesterone.
Pano zvakakoshawo kuyeuka kuti iyo nguva mushure mekuberekwa inogona kurema zvakanyanya - kunyangwe kune avo vasina fibromyalgia - saka zvakakosha kuti uzive kuti ino nguva inogona kutungamira mukuwedzera kwekurwadziwa uye zviratidzo.
3. Ndinogona Kutora Fibromyalgia Mishonga Kana Ndiri Pamuviri?
Kwete, zvinosuruvarisa, hapana mapepa emakonzo anoshandiswa kune fibromyalgia iyo inogona zvakare kushandiswa kana iwe uine pamuviri. Kunyanya ibuprofen inogona kuva nengozi kune vakadzi vane pamuviri. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve kushandiswa kweanouraya marara panguva yekuzvitakura iwe unofanirwa kubvunza chiremba wako.
Fibromyalgia inogona kukonzera kurwadziwa kwakanyanya - kunyanya ne kugabhuka kupota.
Nechikonzero ichi chaicho, zano rekudzivisa mapayipi kana uine nhumbu rakaoma kumedza kune avo vane fibromyalgia. Tsvagurudzo yakaratidza kuti kushandiswa pakati peboka revarwere kuri kukwira kanokwana kana kupfuura pane vamwe varwere.
Tinokurudzira basa revanhu Safe påvirket Medicine (chinongedzo chinovhura muwindo idzva) pakudziya kwaro. Pano iwe unogona kuwana mazano emahara kubva kune nyanzvi nezvekushandiswa kwemishonga panguva yekuzvitakura.
Vanhu vazhinji vanotaura kuwedzera kwekutambudzika kwemhasuru mumutsipa nemapfudzi panguva yekuzvitakura - uye panguva refu yekuyamwisa. Yakakurumbira kudaidzwa Kusimbisa mutsipa. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve ino fungidziro mune yevaenzi chinyorwa kubva Råholt Chiropractor Center uye Physiotherapy mune chinyorwa pazasi.
4. Ndeapi ma Kurapwa Anokurudzirwa Kune Vakadzi Vepamuviri Vane Fibromyalgia?
Kuziva muviri wako pachako uye izvo munhu anopindura zvakanaka kwaari kwakakosha.
Izvo ndezvekuti isu tinopindura zvakasiyana kurapwa kubva kumunhu kumunhu - Asi kurapwa kunowanzo kunakira vakadzi vane pamuviri vane fibromyalgia kunosanganisira:
Kurapa kwepanyama kwemasumbu uye Joints
Tinokurudzira kwazvo kuti kurapwa kwemuviri kuitwe chete nehumwe hutatu hwakapihwa marezenesi pachena nehunyanzvi hwehunyanzvi mumasumbu uye majoini. - physiotherapist, chiropractor kana manual Therapist. Kurudziro iyi inokonzerwa nekuti nzvimbo idzi nhatu dzinotsigirwa uye kudzorwa kuburikidza neDirector yehutano.
Kudya kwakashandurwa kunotarisana nesimba simba revaya vane fibromyalgia kunogona zvakare kuve chikamu chakakosha chekunzwa zvirinani. Iyo 'fibromyalgia dhayeti' inotevera yenyika dhayeti kuraira uye nhungamiro. Unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo muchinyorwa chiri pasi apa.
5. Nei Kurovedza muviri uye Kufambisa Kwakakosha Paunenge Uine Pamuviri?
Kubata pamuviri kunokonzeresa shanduko huru mumuviri - kusanganisira yakawanda-yakatamiswa pelvis.
Sezvo dumbu richikura, izvi zvinoguma nekuwedzeredza kusagadzikana kumusana wepashure uye nhengo dzechikadzi. Iyo yakachinja nzvimbo yepelvic inozokonzeresa kumanikidza nekuwedzera kumanikidza mumajoini epelvic apo iwe unosvika zuva rakakodzera - uye inogona kupa hwaro hwekuvharika kwepachiviri uye kurwadziwa kumashure. Kana iwe wakadzora kufamba mune majoini ari muchiuno, izvi zvinogona zvakare kutungamira mukukura kukuru kumusana. Kugara uchichinjisa kurovedza muviri uye kufamba kwemaitiro kunogona kukubatsira kudzivirira izvi uye chengetedza tsandanyama dzako kufamba pamwe sezvazvinogona.
Kugara uchirovedza zvinyoro-nyoro uye kurapwa kwemuviri kunogona, pakati pezvimwe zvinhu, kuguma nekubatsira izvi zvehutano.
Kuvandudzwa kwekufamba musana, chiuno uye pelvis
Stronger Dzokera uye Pelvic Musums
Kuwedzeredza kutenderera kweropa kusvika kune dzakaonda uye maronda emhasuru
Kuvandudzwa kwemuviri kushanda kunoita kuti uwedzere kusimuka pamajoini, kushaya simba kwemhasuru uye kuwedzera kwemazinga eSyotonin mumuviri. Iyo yekupedzisira ndeyeeurotransmitter iyo inonyanya kusanganiswa nefibromyalgia - nekuda kwekuti iro boka revarwere rine nhanho dzakaderera pane zvakajairwa. Serotonin, pakati pezvimwe zvinhu, inobatsira kudzora mhemo. Akaderera emakemikari mazinga eizvi mumuviri anogona kunge ari chikonzero chekuora mwoyo uye kusagadzikana pakati peavo vane fibromyalgia.
Wakanga uchiziva here kuti fibromyalgia inotsanangurwa seyokubuda ropa rheumatic diagnostic? Sezvimwe nezvimwe zvinetso zveRheumatic, kuzvimba kunowanzoita chikamu mukuoma kwekurwadziwa. Izvi ndizvo chaizvo nei zvichikosha kuti iwe uzive nezve masikirwo ekudzivirira kutapukirwa kubva ku fibromyalgia sezvakaratidzwa mune chinyorwa pasi apa.
6. Ndeapi maCustomer Akakodzera Kune Vakadzi vane Pamuviri Neine Fibromyalgia?
Maekisesaizi evakadzi vane pamuviri anofanirwa kuchinjirwa uye kutarisisa kuti mumwe ari kureba sei kusvika pakuita nhumbu.
Kune akatiwandei emhando dzakasiyana dzekurovedza muviri dzakakodzera vakadzi vane nhumbu vane fibromyalgia - mamwe akanakisa anosanganisira:
Dzidzo yeboka retsika
Kurovedza muviri uchifunga nezvekufamba uye kupfeka kwemaitiro
Yoga yevakadzi vane pamuviri
VIDEO: 6 Yakasarudzika Masimba Masimba Exercise Kune Vaya vane Fibromyalgia
Heano zvinyoro zvitanhatu uye zvakagadzirirwa simba zviitwa zvewe une fibromyalgia - uye une pamuviri. Dzvanya pane vhidhiyo pazasi kuti uone maekisesaizi. ONA: Kurwadziwa kwemashure pamabhora ekurapa ehe saizvozvo zvichave zvakaoma kuzviwanira mukati mepamuviri.
Usashandise Exercise muPombi Yemvura Inopisa Paunenge Uine Pamuviri
Kurovedza muviri mudziva rinopisa remvura chimiro chekurovedza muviri chinodiwa nevakawanda vane fibromyalgia - asi pano zvakakosha kuti uzive kurovedza muviri kwakadaro mumvura inopisa kana inopisa tub hakuna kunaka kana uine pamuviri. Tsvagurudzo yakaratidza kuti inogona kuwedzera mukana wekusaberekerwa (1) kana kukanganisa kwemwana ari mudumbu. Izvi zvinoshanda kumvura inodziya kupfuura 28 degrees.
Wakanga uchiziva zvimwe here kuti kune manomwe mafomu akasiyana eanoti fibromyalgia kurwadziwa? Ichi ndicho chikonzero marwadzo ako anowanzosiyana mukusimba uye kuratidzwa. Verenga zvakawanda nezvazvo kuburikidza neiyi link iri pazasi nyaya, uye iwe uchakurumidza kuve wakangwara zvishoma nezvekuti nei uchinzwa nenzira yaunonzwa.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGI-OG-SVANGERSKAP.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-04-02 19:17:022021-03-24 10:57:47Fibromyalgia uye Mimba
9 Zviratidzo Zvepakutanga zvePfungwa Chii Chaunofanira Kuziva NezvePolymyalgia Rheumatism